Somaliland: Marxuum Shan Caanamaal Mayd Ahaa Oo Lagu Baadhnayay Cusbitaal Iyo Qoyskiisa Oo Ka Gedooday - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Marxuumka oo xannuun sanbabada ahi haleelay ayaa la dhigay mid ka mid ah cusbitaalada gaarka loo leeyahay, waxa loo keenay si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad, waxase taagnayd ajashiisa oo aan calaf u laabnayn. Qoyska marxuumku waxay saxeexeen warqadda dammanada ee qofka lagu dhigo qaybta ICU, isaga oo nolo iyo geeri aan midna ahayn ayaa la geliya qaybta gargaarka degdega,
Balse muddo kaddib waxa laga soo saaray isagoo Koomo wax la moodo ku jira oo aan dhaqaaq lahayn qof kastaana arkaayo rejo la’aanta.
Waxa ku socday kharash xad dhaafa irabado $70 illaa $50 u dhexeeyaoo saacad saacad loo dalbaayo, Kirada sariirta, waxa dul taagan inan kalkaalisa ah oo xaalada lagu yidhi la soco. Dood adagbaa dhakhtarka agagaarkiisa ka socotay muddadaa geeri iyo nolol ninba meel ku tirinaayo Marxuumka. Anigoo oo bookhday marxuumkaasi waxaan la kulmay dadbadan oo ka sheekaynaaya dhacdadan oo kale iyo qaar ka halis badan oo dhacay.
Cusbitaalka waxa jooga kalkaalisooyin qaybtaa ICU, inan qiimo badan oo iga codsatay in aanan magac dhabin waxay noo sheegtay in dhacdadani aanay ugub ahan, dad kale oo soo bookhday iyo kuwo la jaara dhahktarkuna way sheegeen in dad mayda sidan oo kale Ogsajiin iyo shaqo loogu waday oo ay ku socotay lacag qayra xadi. Gabadh saddex todobaad ka hor la keenay oo maydkeeda sariir la saaray way dillaaci gaadhay barar awgii sidii ay u lahaayeen way kasoo raynaysaa koomadana way ka soo baxaysaa daaya Ogasiija ugu xidhnayd !
60 Saac kaddib waxa loo yeedhay laba dhakhtar oo caan ah kana mida dhakhaatiirta magaalada ugu khibaradda badan laguna kalsoon yahay, markii ay soo dul istaageen meydka ayay sheegeen ninkani in uu geeriyooday 60 saacadood ka hor. Waxay amrren in dhammaan laga furo qalabka ku xidhan oo meydka la xurmeeyo lagana saaro cusbitaalka si loo aaso. Cusbtaalka oo ah Ka masaarida ( international hospital hargeisa) ma joogin markaa mees, waxay canaanteen hablihii kalkaalisada ahaa.
Waxa ka jira Hargaysa cusbitaalo badan oo ay ka hawl galaan dhakhaatiir aan khibardooda la hubin, cusbitaalo loo furtay macaash sida bakhaarada oo aan adeegooga cid la socota oo qiimaysaa jirin, waxa loogu adeegaa bulshada qiimo xad dhaafa oo aanu bixin karin qof dan yari, dadka dhaqaalaha haystaa waxay tagaan dhakhaatiirta dibada iyo wadamada jaarka, dadka dan yarta ahna waxa u ciirsiya cusbitaalka guud ee Hargaysa oo gabbal baas u dumay adeeg iyo tayana aanu ka jirin, boqdayna kawaan lagu dhiig miirto dadka. Dawladnimadu waa adeeg iyo daryeel.